Myat Shu - 2014 January
You are here : Myat Shu » Archives for January 2014
Published By Myat Shu On Saturday, January 25th 2014. Under မျက်ရှု, အမှတ်တရ
ဇန်န၀ါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးခင်ယုမေ ကွယ်လွန်သွားပါသည်။ အပြင်မှာ သိပ်ရင်းရင်းနှီးနှီး မရှိသော်ငြား ကျမစိတ်ထဲမှာ ဆွေမျိုးရင်းချာတယောက် ကွယ်လွန်သွားသလိုခံစားရပါသည်။ ချက်ချင်း အင်တာနက်မှာ ခင်ယုမေလို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီး တက်လာသောသူ၏ ပုံလေးများကို ကြည့်ရှုမိပါ၏။ လှလိုက်တဲ့ အမျိုးသမီး။ မျက်လုံးမျက်ခုံး၊ နှုတ်ခမ်း၊ နှာတံများက တခုချင်းဆီမှာလည်း ပြတ်သာထူးခြားသောအလှရှိသလို အားလုံးစုပေါင်းလိုက်တော့လည်း အချိုးညီစွာလှပနေပြန်သည်။ ကိုယိခန္ဓာကလည်း ပန်းပုရုပ်ထုထားသည့်အလား။ မြန်မာခါးတိုဝတ်စုံအောက်မှာ အပိုအလိုမရှိ မိန်းမဆန်စွာ နူးညံပျော့ပျောင်းလှပလွန်းလှသည်။ “ မလိခချစ်သူရုပ်ရှင် ကလေးမြို့ လေဆိပ်မှာရိုက်တုန်းက သူ့ ကို အပြင်မှာမြင်ဖုးတယ်။ အပြင်မှာလည်း အတော်ချောတယ်။ ကလေးလေဆိပ်မှာ လေယာဉ်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ အခန်းရိုက်တော့ သူက မြန်မာအင်္ကျီပန်းရောင်လေးနဲ့ ။ သူပုံစံအတိုင်း နှင်းဆီပန်းတပွင့်ပန်ထားတယ်။ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, January 25th 2014. Under ကဗျာ, မျက်ရှု, ရသ
၀ါရုံသာဝါပြီး ကြွေမကျဖြစ်သေးတဲ့ အဲဒီ့သစ်ရွက်ခြောက်မှာမှ ကိုယ့်နောက်ဆုံးတယောသံက နာနာထိုးတယ်။ တိတ်တဆိတ်အလန့်တကြား ဘယ်အချိန်က ဘယ်သူပစ်ချခဲ့တယ် မသိလိုက်ရတဲ့ ခဲခြစ်ရာများအတိုင်း ဘ၀စက်လက်ကလေးက ပုလဲလိုတွဲလဲ ရွဲလိုတွဲလဲ။ အခါးတွေချိုတဲ့အိပ်မက်နဲ့တည့်တည့်မှာမှ ကိုယ့်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခွင့်ကလေးက ရီဟယ်မောဟယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်လို့ နောက်ပြီး မမနော်ရဲ့ “သံသရာဆိုတာသုံးရာ့ခြောက်ဆယ်” အလည်တည့်တည့်မှာ ပိတ်ချည်ဖွင့်ချည်။ သတိတရ မေ့မေ့ပစ်ခဲ့ရာ ပစ္စုပ္ပန်ဖြတ်စများ ဒုက္ခရှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ နောက်ထပ်ကောင်းကင်ဟောက်ပက်သုံးခုစာ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးနဲ့လောင်းကြေးထပ်မယ်။ ကျန်ရစ်သူ ဘူတာများ ကောင်းကင်ကြီးတိမ်းမှောက်ရာခေါက်သားအတိုင်း ဟားတိုက်တွန့်ကြေစီးဆင်း။ ကျန်ရစ်သူ မှုန်ပျပျများ အခြားသော သူစိမ်းတရံလောကဓံလေးပါး သူမရဲ့ရထား သူမရဲ့သက်ဝင်ရာဘာသာတရားက “ ကိုးကွယ်ရန်မရှိ” ဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ကောင်လေးက အညိုရောင်နဲ့အဖြုရောင်မှာ စုတ်တံကို တလှည့််စီနှစ်ရင်း။ လက်ဖ၀ါးနှစ်ခုက…. ခပ်တင်းတင်းဆုတ်ထားရင်း။ အမှားရွက်တစ်ထောင်ကြွေကျရပြီးမှ အမှန်တရား တစ်ပွင့် စပြီးဖူးတယ်ပွင့်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူမဟာ သံသရာမျှော မျှောတင်မိလက်စ စွန့်ကြိုးအစအနကလေးကို ဆောင့်ဆွဲရင်း ဆွဲရင်း ။လက်တန်းပုံပြင်တပုဒ်ရဲ့အလိုတော်အရ တလမ်းမောင်း အချိုးအကွေ့များအတိုင်း ကျမတို့ကို ဇာတ်ညွှန်းခွဲကြတဲ့အခါ အတိုးအကျယ်..အတိမ်အနက်…အလင်းအမှောင်ဆိုတာ ကံကြမ္မာရဲ့လက်ရေးလက်သားပါပဲ။ ခုနကသစ်ရွက်ခြောက်ကလေး အလင်းပြန်ခတ်ချိန်မှာ ကိုယ်ရဲ့တယောသံ….အစိမ်းရောင်အားလုံး ပြန်ယူလာခဲ့ပါမယ်။ ညိုခက်ကျော် ( ၂၀ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၄) ညနေ ၅ နာရီ ၅၆။ ... Continue Reading
အက်ဆေး နှင့် ရသစာတမ်း
Published By Myat Shu On Wednesday, January 22nd 2014. Under မျက်ရှု, သူတို့အာဘော်
အက်ဆေးကို နိုင်ငံ တကာတွင်ရော၊ ကမ္ဘာ့ စာပေတွင်ပါ အဆင့်မြင့် စာပေပုံသဏ္ဌာန် တစ်ရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး၊ လေးစားလောက်ဖွယ် အရည်အသွေး ရှိသောစာဟု ခံယူထားသည်ကို၊ စာပေ သမားတိုင်းနီးပါး ကြားဖူးကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ၀တ္ထုတို တစ်ပုဒ်၊ ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ကို စာမူခ ငါးထောင်ပေးလျှင် အက်ဆေးခေါ် ရသစာတမ်းကိုတော့ လေးထောင်တန်းလောက်တွင်ထားကာ၊ တစ်ဆင့် နိမ့်ထားချင်ကြဆဲ ဖြစ်သည်။ အဘယ်သို့သော ရွှေဥာဏ်တော်ဖြင့် အကဲခတ် သတ်မှတ်သည်ကိုတော့ မသိပါ။ အယ်ဒီတာ ၀ါးမ၀၍၊ နားမလည်၍၊ အမြင်တိမ်၍ဟု ဆိုပါလျှင် အနာပေါ် တုတ်ကျသလို ဆတ်ဆတ်ခါ နာကြပေဦးမည်။ တကယ်တော့ အက်ဆေးသည် တိုတိုလေးနှင့် အများကြီး တာသွားသော စာပေသိက္ခာရှိရှိ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Thursday, January 16th 2014. Under ထင်ရာမြင်ရာ, မျက်ရှု, သုတ, ဆောင်းပါး
နေလို့ သိပ်မကောင်းတာနဲ့ လှဲအိပ်နေရင်း စိတ်ကူးပေါက်တာနဲ့ သက်ဦးဆံပိုင် ရှင်ဘုရင်ခေတ်မှာ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ လင်ကွာ၊ မယားကွ၊ ဘာသာခြား လင်နေ၊ မယားနေ ကိစ္စတွေကို ရှေးဓမ္မသတ် ဖြတ်ထုံးတွေမှာ ဘယ်လို ပြဆိုသလဲ ဆိုတာ သိချင်လို့ ဆရာဦးအောင်သန်းထွန်း ပြုစုတဲ့ ဓမ္မသတ်သမိုင်း သုံးစောင်တွဲကို ဖတ်ကြည့်တော့ မင်းတုန်းမင်းတြားကြီး လက်ထက်တော်မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ “သတင်းစာဥပဒေ” ကို မထင်မှတ်ပါဘဲ တွေ့ရပါတယ်။ အရင်တုန်းက ဒီဓမ္မသတ်ဥပဒေကို တစ်ခေါက်မှ မဖတ်ဖူးပါဘူး။ အခု ဖတ်ကြည့်တော့မှ ရှေးပညာရှိတွေရဲ့ အမြော်အမြင်ကို သိခွင့်ရပါတော့တယ်။ ဒီ သတင်းစာဥပဒေကို မြမ္မာသက္ကရာဇ် ၁၂၃၅ ခုနှစ် (ခရစ်နှစ် ၁၈၇၃) မှာ ပြဌာန်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Wednesday, January 15th 2014. Under မျက်ရှု, ရသ, အက်ဆေး
Picture: Mary DuCharme အမေ့ကို အစောဆုံး မှတ်မိရသည်မှာ ကျွန်တော် နို့ဖြတ်တုန်းက ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော် ဘယ်အရွယ်ရောက်ပြီဟုတော့ မမှတ်မိ။ ကျွန်တော်တို့မှာ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်သာရှိပြီး ကျွန်တော်က အငယ်ဖြစ်သဖြင့် တောက်တောက်ပြေးလွှားကစားသည့် အရွယ်တိုင် နို့စို့တုန်း ဖြစ်လေသည်။ ဘုတလင်မှာ မွေးသော်လည်း ကျွန်တော့်အဖေ မြေတိုင်းစာရေးကြီးသည် သားရိုးကုန်းအုပ်စုကို ကိုင်ရသဖြင့် သားရိုးကုန်းရွာသို့ ရွှေ့နေကြရသည်။ လထိန်ထိန်သာသော တစ်ညတွင် နို့စို့အပြီး အမေက ကျွန်တော့်အား နှမ်းလုံးကလေးများ ကျွေးပါသည်။ အတန်ကြာသော် ကျွန်တော့်ကို ပါးစပ်အဟ ခိုင်းပြီး နှမ်းလုံးကလေးတစ်လုံး ချောင်ကြိုချောင်ကြားက ဆွဲယူ၍ ကျွန်တော့်အား ပြပါသည်။ ‘ကြည့်စမ်း၊ ငါ့သား၊ ခုအရွယ်ထိ နို့စို့တော့ သွားပိုးကလေးတွေ ကျနေပြီ။ နောက်မစို့နဲ့တော့နော်’ နှမ်းလုံးကလေးဖြစ်မှန်း သိပါသည်။ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Wednesday, January 8th 2014. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု, ရသ
ပြတင်းမှန်မှတဆင့် မြစ်တဘက်ကမ်းကို လှမ်းကြည့်သော် မိုးတိမ်တိုက်များကြောင့် ပုံမှန်မြင်ရလေ့ရှိသည့် ရွှေရောင်ဝင်းဝင်းအဆင်းဖြင့် ကျိုက်ဘွဲ့အစချီသော ဘုရားကို မဖူးရချေ။ ကောင်းကင် နိမ့်ဆင်းလာသည်မှာ မြစ်ရေပြင်နှင့် ထိစပ်တော့မတတ် ရှိလေ၏။ သည်းသည်းမည်းမည်း မိုးရွာတော့မည်ဟန် ဖြစ်သည်။ တခြားသော မြစ်ကမ်းပါးမှာရော မိုးရွာနေလေသလား။ အပူပိုင်းမုတ်သုံဒေသပင် ဖြစ်သောကြောင့် ထိုနေရာမှာလည်း မိုး ရွာတန်ကောင်းပါရဲ့။ မိုးရွာလျှင် လွမ်းတတ်သူတယောက် မြစ်ကမ်းနံဘေးမှာ ရောက်နေလေသလော။ လွမ်းကြောင်း….. သူ့ကို ပြောပါလေ။ *** ( ၁ ) အခါတပါးက မြစ်ဧရာကမ်းပါးတွင် နှစ်ဦး အတူတကွ ရှိစဉ်ခိုက် မိုးဖွဲလေး ရွာခဲ့ဖူးသည်။ မိုးရွာပြီဟ ဟု ရေရွှတ်ကာ ထပြေးဟန်ပြင်နေသူ စန္ဒီ့ကို ‘တိတ်တိတ်နေ မိုး လန့်သွားမယ်’ ဟု မြစ်ကမ်းပါးဘေးမှ အသုပ်ဆိုင် ပိုင်ရှင်အဒေါ်ကြီးက ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, January 4th 2014. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု, ရသ
(၁) တစ်ခုသော သီတင်းကျွတ်လတွင် ကျွန်ုပ်သည် ဖျာပုံအပိုင် အမာဒိုင်နယ် အတွင်းရှိ ဂေါ်ဒူဟု အမည်တွင်သော ပင်လယ်ရွာကြီး တစ်ရွာသို့ အလုပ်ကိစ္စဖြင့် ရောက်ရှိနေလေ၏။ ပြုဖွယ်ရှိသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများမှာ ရက်ပိုင်းအတွင်း ပြီးပြတ်သွားသော်လည်း အမာသို့ ပြန်ရန် လိုင်းသဘောင်္ မရှိသေးသောကြာင့် ဂေါ်ဒူရွာတွင် နှစ်ရက်သုံးရက်ခန့် ကျောက်ချပြီး သဘောင်္ကြုံ စောင့်ဆိုင်းနေရလေ၏။ “မိုးလေကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ်” ဟု ဆိုကြသော်လည်း ပင်လယ်ပြင်တွင် ဖြစ်ထွန်းနေသော မိုးနှောင်းကာလ မိုးသက် မုန်တိုင်းငယ်များ၏ အရှိန်အဟုန်ကြောင့် ဂေါ်ဒူရွာ ၀န်းကျင်ရှိ ရာသီဥတုမှာ ကြည်လင်သင့်သလောက် မကြည်လင်နိုင်သေး။ ဂေါ်ဒူကျေးရွာ၏ ကောင်းကင် မျက်နှာကြက်ကို မိုးနှောင်း မုန်တိုင်းငယ်များ သယ်ဆောင်လာသည့် မုတ်သုန် မိုးတိမ်တို့ ပိတ်ဆို့ ကာဆီး ထားသဖြင့် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, January 4th 2014. Under Myat Shu eZine, မျက်ရှု, နှလုံးသားစာမျက်နှာ
ရယ်သံတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ နာကျင်စရာတွေ ရှိပါသည်။ မကြာမကြာ နာကျင်လေ့ ရှိသော်လည်း သူမ ကျင့်သားမရပါ။ ဟားတိုက်သာ ရယ်ပစ်လိုက်သည်။ နာကျင်မှုတွေဟာ သာယာမိစရာ ကောင်းပါသလား။ တပ်မက်မိစရာ ကောင်းပါသလား။ စွဲလမ်းမိစရာ ကောင်းပါသလား။ ကြယ်တွေ လင်းတာ သူမအတွက် မဟုတ်သော်လည်း မော့ကြည့်ပြီး ကြယ်တို့၏ အငွေ့အသက်များကို တ၀ကြီး ရှုသွင်းပစ်လိုက်သည့်အခါမှာ ဘယ်ကြယ်ကမှ သူမကို စိတ်မဆိုးပါ။ အိပ်မက်များကို ကြယ်တို့၏ အငွေ့အသက်များက ဖန်တီးခြင်း ဖြစ်သည်။ သူမ မအိပ်စက်ဘဲ အိပ်မက်မက်ချင်ပါသည်။ မအိပ်စက်ပေမယ့် သူမ နိုးလာခဲ့သည်။ သိပ်စောသွားသလား၊ သိပ်နောက်ကျသွားသလား။ တကယ်တော့ ညက သူမနားမှာပဲ ရှိသေးသည်။ ညတွင် သူမအရိပ် မထင်ပါ။ ဘယ်သူ့အရိပ်မှ မထင်ပါ။ ... Continue Reading
လူမျိုးပေါင်းစုံနိုင်ငံ၏ အကိုကြီး၊ ညီလေး ငြိမ်းချမ်းရေး
Published By Myat Shu On Saturday, January 4th 2014. Under Myat Shu eZine, မျက်ရှု, ဆောင်းပါး
ကမ္ဘာတွင် ပြည်တွင်းစစ်အရှည်ကြာဆုံး တိုင်းပြည်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံနေရလျက်ကပင် ဗမာပြည်သူ ပြည်သားများသည် ယနေ့အထိ ရေရှည်တည်တံ့သော စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးအနှစ်သာရကို မခံစားရသေးချေ။ ဇာတ်ကြောရှည်လှသည့် ဇာတ်မျောကြီး၏ ဘုံသဘောတူညီချက် မရနိုင်သေးသော ပဋိပက္ခဇစ်မြစ်ကို စစ်ကြောရန်အတွက် လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံရန် အလှမ်းကွာခဲ့သော်လည်း ယနေ့လွှတ်တော်အတွင်း ရောက်ရှိနေသော တိုင်းရင်းသားပါတီအချို့နှင့်မူ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ရခဲ့သည်။ ဗမာပြည် နိုင်ငံရေးပါတီများသည် အများအားဖြင့် နိုင်ငံရေးအယူအဆကို အခြေခံခြင်းထက် တိုင်းရင်းသားအရေးကို အခြေခံပြီး ကွဲပြားပါသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါတီပေါင်း ၂၃၆ ပါတီ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ တိုင်းရင်းသားပါတီနှင့် တိုင်းရင်းသားများ၏ အကျိုးစီးပွားကို အထူးပြုရှေ့တန်းတင် အခြေခံဖွဲ့စည်းသောပါတီပေါင်း ၆၃ ပါတီရှိခဲ့သည်။ ၂၇ % ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ၂၀၁၀ ... Continue Reading
ပို၍ ပို၍ သိလာရသော အုတ်ဖိုသားတစ်ယောက်အကြောင်း
Published By Myat Shu On Wednesday, January 1st 2014. Under Myat Shu eZine, မျက်ရှု, အမှတ်တရ
လမ်းကားဤသို့၊ လူကား အဘယ်သို့ လွန်ခဲ့သည့် အနှစ်သုံးဆယ်ကျော်က ဖြစ်၏။ ကျွန်တော်သည် တာမွေအ၀ိုင်းမှ ဂွတ္တလစ်ဈေးဘက်သို့ ဦးချစ်မောင်လမ်းအတိုင်း ဆိုက္ကားတစ်စီးဖြင့် စီးလာသည်။ ရှေ့တွင် မြင်နေရသောလမ်းမှာ လမ်းနှင့်မတူ၊ ဤလမ်းတွင် ဒယ်အိုး၊ ဒယ်ခွက်ကြီးများခင်းထားသကဲ့သို့ ချိုင့်လျက်ခွက်လျက်၊ ထန်းသီးလုံးများ အမြောက်ဆံလုံးများ ပြန့်ကျဲထားဘိသို့ ခုံးခုံးလုံးလုံး၊ မိကျောင်းကျောရေခင်းထားသည့်အလား၊ အက်ကွဲကြောင်းများဖြင့် အတော်ပင် အကျည်းတန်အရုပ်ဆိုးသော လမ်းဖြစ်၏။ ထုိ့ပြင် ယာဉ်အမျိုးမျိုး၊ လူအထွေထွေတို့မှာလည်း ခွေကာခွင်ကာ၊ ယို့ကာ ယိမ်းကာ၊ မြင့်ကာ နိမ့်ကာဖြင့် မရှုမလှ သွားလာနေကြရသည်။ “တောက်… ဆိုးလိုက်တဲ့လမ်း၊ ဦးချစ်မောင်လမ်းတဲ့နော်…. လူတော့ ဘယ်လိုနေမယ်မသိဘူး၊ ဦးချစ်မောင်ကို သိလား” ချွေးပေါက်ပေါက်ကျနေသော ဆိုက္ကားဆရာ၏ တောက်ခေါက်သံနှင့် သူ၏ စကားကို ရုတ်တရက် ကြားလိုက်သောအခါ ကျွန်တော့်မှာ မင်သက်မိသွား၏။ ... Continue Reading